Brezila: Resaka Fanamboniana Kokoa Ny Lehilahy Mandritra ny Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2012 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Português, 한국어, 日本語, македонски, English
Momba ny Olaimpika ao Brezila, niteraka adihevitra teo amin’ny fampahalalam-baovao an’olo-tsotra ny fitantarana nataon’ny fampahalalam-baovao mahazatra mikasika ny ireo atleta vehivavy, miteraka fanoherana ny fomba fandefasana sy fitantarana mivantana ny Olaimpika.
Bilaogin’i Ativismo de Sofá naneho hevitra momba ilay vaovao milaza fa matavy loatra ilay mpilomano Aostraliana. Ankoatra ny filazana ny adihevitra tao amin’ny Twitter eo amin’ny mpanao gazety lehilahy sy ny mpanohana ireo mpilalao baolina kitra vehivavy ao Brezila, niova naneho hevitra manodidina ny fitafin’ny atleta indray ilay lahatsoratra bilaogy:
Fitantaran'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ho an'ny lehilahy sa ny vehivavy ny fanatanjahatena. Sary: Jornalismo B, under CC BY-NC-SA 2.5.
Anisan’ny fomba fametrahana ny vehivavy ho toy ny “zavatra” ny fanamaivanana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin’ny fanatanjahantena. Ohatra, nahare foana aho matetika fa mahery kokoa ny ekipa lehilahy amin’ny “volley” noho ny ekipa vehivavy. Na koa hoe ny lehilahy no tena mahafehy ny baolina kitra fa tsy ny vehivavy, sns. Vokatr’izany, raha tsy mahasarika kokoa ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’ny fanatanjahatena noho ny lehilahy, inona no hamelona ny fanatanjaha-tena, anisan’izany ny ara-bola? ny toe-batan'ilay atleta. Farafahakeliny, izany no heverin'ny fampahalalam-baovao ara-panatanjahatena, indrindra amin’izao fotoana mampalaza ny Lalao fanatanjahatena sy ny fanaovana mihoatra noho ny vita izao
Tamin’ny lahatsoratra bilaogy hafa, Jornalismo B nitatitra fa nanjary vaindohan-draharahan’ny mpanao gazety Breziliana ny resaka ara-nofo momba ny ekipa mpiambina tsato-kazo (goal) ao Brezila amin’ny handball, ka manakona ireo mpanao gazety tsy hahita mangirana amin’ny ezaka goavana vitan’ireo atleta sy ireo andian-dalao nandraisan’ny ekipa anjara
Machismo chato de cada dia , tao amin’ny lahatsoratr'i Olimpíadas do Machismo ( Olaimpika Machismo), nanasokajy ny vaovao momba ny “fahatsaran’ny toe-batan'ny atleta vehivavy amin’ny Olaimpika” ho anisan’ny tsy-vaovao tokony hotaterina. Hoy ny lahatsoratra nanohy:
Seho tsy misy fanajana ho antsika rehetra, vehivavy sy ny lehilahy, indrindra ho an’ireo atleta vehivavy misolotena ny fireneny ka mandray anjara amin’ny fifaninana, taorian'ny fanazarantena an-taonany maro, sy ankehitriny, ka fehezina tsotra fotsiny amin’ny lanja mihoam-pefy na tsy ampy, ny toetry ny volony, ny tsiky ary koa mazava ho azy: ny feny.
Miresaka momba ny zon’olombelona amin’ny endrika isan-karazany isehoany kosa ny bilaogy Direitos Fundamentais LGBT, manome fanazavana momba ny fanavakavahana mihatra amin’ny vehivavy, ny fiarahan’ny lahy samy lahy, sy ny fanatanjahatena:
…Napetraka tamin’ny fomba fijery mitanila ny fanavakavahana misy eo amin’ny sehatry ny Fampianarana ara-panatanjahatena ka nanome lanja ny lehilahy [fandresen’ny vehivavy] amin’ny fomba fanao ara-kolontsaina. Arak’izany, nosokajiana ho toy ny tsy manan-danja ny fitoviana ara-panananaha (homesexuelité) sy ny maha-vehivavy.
Tao amin’ny bilagy Pílulas Diárias kosa, nametraka fanamby amin’ny fahefan’ny lehilahy ny fisian’ny vehivavy amin’ny lalao Olaimpika. Nandinika mahitsy ny zava-misy, niresaka momba ny fizarana lozika misy eo amin’ny ekipa lehilahy sy vehivavy ny mpanoratra.
Tsy zavatra avy amin’ny natioran’ny olombelona ny fiheverana fa tokony hiavaka ny sehatra misy ny lehilahy ka tsy mitovy ny an’ny vavy, fa toetra napetraky ny fiarahamonina izany. Mazava tsara fa misy foana ny fanatanjahatena isan-karazany, saingy tsy voatery hoe natokana ho an’ny lahy na ny vavy ny fepetra takiana aminà taranja iray. Ahoana raha jerena ny tanjaka, ny lanja ary ny fahavitrihana? Tsy mety ny fanavahana ara-pananahana. Ary fitaovana iray mampiavaka antsika sy mahatonga antsika mahatsiaro ho miavaka amin’ny hafa